Wax Ka Ogow TodobaFaa´iido Oo Dhinaca caafimaadka ah Kuwaas Oo Soonka laga helo | Hawraar
June 4, 2016 Bar ama Baro, Caafimaadka, Xiisaha/Xulashada
Wax Ka Ogow TodobaFaa´iido Oo Dhinaca caafimaadka ah Kuwaas Oo Soonka laga helo
Iyada oo ay Fooda Inagu hayso bishii Barakaysnayd ee Ramadaan ayaanu qoraalkeenan isku baraarujin doonaa woxogaa Faa’idooyinka uu soomka bisha Ramadaan u leeyahay dhinaca Caaafimaadka iyo foyo qabka qofka Sooman. hadaba 7 arrimood ayaa kala ah sidan.
1)-Timirta : Inkastoo ay tahay sunno in lagu afuro 3 xabbo oo Timir ah, haddana waxaa laga helaa saddex faa´iido oo xagga caafimaadka ah :
A. Waxaa laga helaa tamar, 1 xabbo oo Timirta ah waa 31gr una dhiganta, kolka saddexdii xabbo waxaa laga helayaa 372kcal(kilocalorie).
B. Timirtu waxay ka mid tahay cuntada qolofta leh sidaas daraadeed waxay u fiican tahay dheefshiidka iyo in aan calooshu adkaan.
C.Waxaa Timirta ku jira cadad badan oo ah potassium, magnesium iyo B vitamin .Kuwaasoo faa´iido badan jirkeenna u leh.
2)-Maskada oo kuu dhallinyarowda(Boost your brain) shaki kuma jiro in dadka iimaankoodu fiican yahay ay farxad ku qaabbilaan Ramadanka iyagoo ajar rajaynaya. Intaas waxaa dheer, baaritaanno lagu sammeeyay maskaxda dadka soomman oo ay USA lagu sameeyay ayaa caddaysay in xilliga Ramadanka ay saa´idaan walxaha maskaxda kobciya (brain-derived neurotrophic factors),kuwaa sahla in la soo saaro unugyo maskaxeed cusub (brain cells) oo saaídiya maskaxda xusuusteeda, iyo guud ahaan shaqadeeda.
Waxaa kale oo hoos u dhaca xilliga soonka soo saaridda dheecaanka cortisol .Halkaasna waxaa ku yaraada heerka Istareeska (stress) wakhtiga Ramadanka iyo ka dibba.
Yaraynta ama goynta balwadaha xunxun( Dicth bad habitis) : Qofka soomman wuxuu maalintii oo dhan ka qatan yahay balwadaha xunxun sida Sigaarka, qaadka,khamrada iyo sonkorta badan . Kolka waa xilliga ugu fiican ee dad badani ka faa´idaystaan inay iska jaraan ama aad u yareeyaan balwadaha xunxun.
Run ahaantii bahda caafimaadka Ingiriisku (UK’s National Health Service) waxay ku taliyaan in xilliga Ramadanka la iska gooyo Sigaarka.
Hoos u dhac subagga dhiiga (Lower cholesterol) : Subbagga dhiiga oo sareeyaa waa khatar .Soonkana waxaa la ogyahay in miisaanku dhaco, waxaana barbar socda oo isna dhaca subagga dhiiga ku jira (waa haddii qofku cunto caafimaad cuno afurka iyo saxuurta).
Kolka subagga dhiiggu hoos u dhaco, waxaa yaraada cudurada wadnaha iyo xididdda dhiiga, iyo waliba dhiig karka iyo falugga.
Rabitaankaaga cuntada oo hagaaga (lasting appetite reduction) : Inkastoo cuntada oo qofku uusan jeclaysan ay keeni karaan sababo faro badan sida jirrooyin kala duwan,haddana waxaa jira dad badan oo cunto xumo badanaa la soo daristo. Ramadanku wuxuu kordhiyaa jacaylka cuntada, kaasoo qayb wayn ka ah caafimaadka qofka.
Sifeynta sunta jirka (Detoxify) : Beerku wuxuu qayb libaax ka qaataa dheefshiidka, isagoo 24-ka shaqeeya, si uu energi ug diro jirkeenna iyo wali howl wayn oo qashin sifaynta jirta . Xilliga soonka kolka ay sonkorta jirka ku yaraato, wuxuu bilaabaa jirku isticmaalka baruurta si uu enerji(Energi) uga sameeyo. Sidaasna wuxuu ku sifeeyaa baruurtii sunta ahayd ee jirka ku jirtay.
Dheefsiga(nuugidda) jirka ee nafaqooyinka (Absorb more nutrients) : Wakhtiga qofku sooman yahay waxaa wanaagsanaada dheefshiidka, kaasoo ay daba socoto inuu bato nuugitaanka waxyaaba nafaqada ah ee cuntada ku jira . Waxaa arrintaa u sabab ah badashada uu bato dheecaanka la yiraahdo adiponectin,oo ay soo saariddiisu badato, kolka qofku sooman yahay iyo kolka cuntada qofku cuno xilliga danbe ee habeenkii(saxuurta).
Waxay baaritaanna dhakhaatiirtu muujisay in soonqaadku u fiican yahay dadka dhiig karka qaba iyo waliba kuwa sokorowga noociisa labaad(Diabetes mellitus type 2). Wuxuu kale oo Ramadanku u fiican yahay dadka cayilka lagu ibtileeyay.
Dadka qaata dawooyinka sida tan qalalka, neefta, sonkorowga noociisa koowaad waxaa lagula talinayaa inay dhakhtar aqoon u leh, muslimna ah u tagaan afar bilood ka hor.
ALLOW NABAD NAGU GAADHSII RAMADAANKA ……………..AAMIIN